Terms and Condition (Myanmar Language)
ဤ ၀က်ဆိုဒ်တွင် ဆရာမှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုအပ်သော အခြေခံ မှတ်ပုံတင်ပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များသည် အများပြည်သူကို ချပြပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့သော်လည်း ၀က်ဆိုဒ်တွင် လူမှုရေးအရ စူးရှနိုင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အချို့ကို ပြသထားမည်မဟုတ်ချေ။ ဥပမာ - ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး၊ အိမ်ထောင်ရှိ/မရှိ၊ ကလေးရှိ/မရှိ အစရှိသော သင့်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကိုလည်း ၀က်ဆိုဒ်တွင် အများပြည်သူမြင်နိုင်သည့် အချက်အလက်များမှအပ အခြားအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ချေ။ ယခုလက်ရှိတွင် သင်သည် သင့်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိသေးပေ။ သို့သော်လည်း နောင် ခြောက်လအတွင်း သင့်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးမည်ဟု လျာထားသည်။ ဤ website သည် ကျောင်းသား/သူများအတွက် မိမိတို့သင်ချင်သည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ အချက်အလက်များကိုသာ ပြသထားတာဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းသားနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမကြား ပဋိပက္ခများသည် sayar.com.mm နှင့် မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကျောင်းသားနှင့် ဆရာကြား ပဋိပက္ခများကိုလည်း တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေလမ်းကြောင်းဖြင့်သာ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျောင်းသားဖြစ်စေ၊ ဆရာဖြစ်စေ၊ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်များ၊ ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းမှုများရှိလာပါက ဤ website တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သည်။ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Terms and Condition (English Language)
We will need your basic personal information such as name, age, phone number, nationality, email, language spoken which will be publicly available for display on the website www.sayar.com.mm. However we will avoid posting socially sensitive information such as religion, race, personal income, etc on the website. We will not handover your personal information to any third party organization except that are already publically available on our website. At the moment, you will not be able to modify information of your own profile. However you will be givenauser login account which will allow to take control of your profile which is likely to happen within six months. The information on this website is provided as "as is", with no guarantees of completeness, accuracy or timeliness, and without endorsement of any kind, express or implied. We will not be involved in any conflict arises from interaction between students and tutors. However if you are reported to be unethical or under legal prosecution, we will not list you on our website anymore. We reserve the ultimate right to decide on whether to remove you or keep you on the website.